ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ (ကိုယ်စား)၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်နိုင်ငံတကာဆက် ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်ဦး မော်ရိုကိုနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Abdellah EI Housin ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ (ကိုယ်စား)၊ပြည်သူ့လွှတ်တော်နိုင်ငံတကာဆက် ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်ဦး မော်ရိုကိုနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Abdellah EI Housin ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်ဦးသည် ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် မော်ရိုကိုနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Abdellah EI Housin ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၂၀၁၄ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက် နံနက် (၉) နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ရေးရာဆောင် (I-1) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံလွှတ်တော် အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် လွှတ်တော် ရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်ဦးနှင့်အတူ ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးကိုကိုထွန်း၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်အေးအေးမူနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။